China cationic polyester spandex mélange jersey machira vagadziri uye vanotengesa | Huasheng
Iyi cationic polyester spandex mélange jira jira, yedu chinyorwa nhamba FTT-WB180, yakarukwa ne9% spandex (elastane), 62% polyester uye 19% cationic.
Iyo cationic polyester spandex mélange juzi jira rakarukwa nemusanganiswa wefibisi iyo yakachinjika dhayi kuti igadzire yakashata mhedzisiro. Iyo mélange juzi jira inoratidzira akawanda mumvuri we grey kana grey nemumwe muvara. Kune anotevera heather mavara anowanikwa kune yedu mélange juzi jira panguva ino.
Iyi cationic polyester spandex mélange juzi jira rakanakira leggings, kudziya gumbo, mutambo mapfupi, zvipfeko zvemukati, mabhureki emitambo. Ino fambisa hunyoro kure nemuviri uye kuramba kunhuwa kwekunhuhwirira. Iyi mélange juzi jira inoramba ichioma uye isina hwema-isina panguva yekuita kweanopfeka. Zvakanyanya kugadzikana kupfeka.
Kuti usangane neyakaomarara mhando yevatengi, aya mélange juzi machira anogadzirwa needu epamberi denderedzwa yakarukwa michina yakaunzwa kubva kuEurope. Muchina wekuruka uri mumamiriro akanaka uchaona kuruka kwakanaka, kutambanudza kwakanaka, uye kupenya kwakajeka. Vashandi vedu vane ruzivo vanozotarisira zvakanaka iyi mélange jersey machira kubva ku greige imwe kusvika kune imwe yekupedzisa. Kugadzirwa kwese mélange jira machira kuchazotevera maitiro akaomarara ekugutsa vatengi vedu vanoremekedzwa.
Pashure: Heather Jersey yakarukwa mélange yakatambanudza machira
Zvadaro: Mélange akatsvaira jira reJersey